AI processor arụnyere n'ime ya.
IP65 enweghị mmiri, enwere ike iji ya n'èzí.
Enyere API na protocol.
Ogologo nchọta 5 ruo 50 dị anya.
Enwere ike ịtọ mpaghara 4 dị iche iche ka ọ gụọ iche.
Nchọpụta ebumnuche, nsochi, agụta.
mgbochi anwụ anwụ
Ezubere iche maka mmụta na ọrụ mmezi.
HP199 AI Mpempe ụgbọ alabụ ụgbọ ala na-agụta ọnụ ụgbọ ala na-abata na nke na-apụ apụ. Enwere ike iji ya gụọ ihe ndị ọzọ ma ọ bụ jiri ya mee ihe maka ndị mmadụ na-agụta. Ọtụtụ n'ime anyịMpempe ụgbọ ala bụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha ziga gị ozi zuru ezu gbasara anyịMpempe ụgbọ ala.
HP199 AI Mpempe ụgbọ ala nwere mgbawa nhazi AI arụnyere n'ime ya, nke nwere ike mezue nleba anya n'onwe ya, gụta nnabata na njikwa. Enwere ike iji ya maka njikwa mgbochi ọdụdụ, ịgụta ụgbọ ala, njikwa oke mmadụ, njikwa mpaghara na ọnọdụ ndị ọzọ. Enwere ike ijikọ ya na ndị na-edekọ vidiyo diski ike DVR ika iji nye vidiyo nkọwapụta dị elu ngwaahịa na-agụta ọtụtụ ebumnuche na ọtụtụ ọrụ nwere ọrụ nlekota oru, HPC199 AI.Mpempe ụgbọ ala enwere ike iji ya na ịntanetị ma ọ bụ guzoro naanị ya, ma nwee ike ịnye ngwọta nchịkwa nchekwa nwere ọgụgụ isi maka njem nlegharị anya azụmahịa, mkpọsa, ogige ntụrụndụ, ụlọ akụ, njem okporo ụzọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
HP199 AI Mpempe ụgbọ ala na-ejikọta ọrụ ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ, nke na-adịghị emetụta akụkụ anya.
Ebe nlele kachasị elu nwere ike ikpuchi ihe ruru mita 20. Ọ nwere ike soro ebumnuche 50 n'otu oge.
A na-eme ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala dịka mpaghara ahaziri ahazi yana ntụzịaka agụta ebumnuche.
Naanị otu AHPC199 counter ụgbọ ala nwere ike ịghọta ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ụgbọ ala na-abata ma na-apụ apụ.
HP199 AI Mpempe ụgbọ alanakweere imewe mmiri anaghị egbochi IP65, nke nwere ike iji otu izi ezi na-agụ ụgbọ ala ọbụlagodi mgbe ejiri ya n'èzí. HP199 AI Veụlọ ntu na-akwado ntinye n'akụkụ ọ bụla, na ihe gbasara nke puru omume nke emetụta ya n'okpuru ọkụ azụ, ọkụ azụ ma ọ bụ ìhè anyanwụ dị oke ala. Ọ nwere ike nyochaa mmetụta nke onyinyo ebumnuche na-akpaghị aka. Ọ na-eji ihe mmetụta onyonyo nwere mmetụta nke ukwuu ọbụlagodi n'abalị nwere ìhè gburugburu na-adịghị ike. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala nkịtị. Mgbe HPC199 AIMpempe ụgbọ ala enweghị ike ịkọwapụta ebumnuche n'ụzọ ziri ezi n'otu akụkụ, enwere ike iji mmụta na ọzụzụ a ga-eji bulie ihe nlele ebumnuche iji kwalite ọnụego nnabata.
Ọrụ agụ ụgbọ ala nke HPC199
1. Njikwa ọrụ netwọkụ, mmekọrịta oge netwọkụ, na-akwado nlekota oge dịpụrụ adịpụ.
2. Nkwado dijitalụ 3D mbelata mkpọtụ, ihe oyiyi ahụ doro anya ma dị nro.
3. 1 RJ45 interface, 1 DC12V interface, 1 kọntaktị siri ike, 1 RS485 interface.
4. Nkwado ONVIF protocol, ụkpụrụ G28181 mba.
5. Na-akwado nchọpụta nrịbama nke ndị njem, nchọpụta ụgbọ ala, njikwa mpaghara nkwado, njem njem na ụgbọ ala mgbagwoju anya nchọpụta.
6. Nkwado akpaka Malitegharịa ekwentị ọrụ mgbe ike ọdịda / na-atụghị anya ọdịda.
7. Nkwado agwa superposition, superposition ọnọdụ mgbanwe na akpaka agbara agba ngosi.
8. Nhazi ọkwa mmepụta ihe, nhazi dị mfe, nhazi dị elu na nkwụsi ike siri ike.
9. Nkwado akpaka ịmafe nke nzacha na-aghọta ehihie na abalị nlekota oru, na-akwado ekwentị mkpanaaka nlekota oru; POE ike ọkọnọ (nhọrọ).
10. Na-akwado nchọpụta mmegharị ihuenyo / mkpuchi ihuenyo, ebe nchọpụta 4 na mpaghara 4 nwere ike ịtọ.
11. Onye ọrụ nwere ike họrọ iyi koodu na mezie etiti ọnụego, mkpebi, na video àgwà.
Mpempe ụgbọ ala
Ụdị ọkọnọ ike
DC12V ike nkwụnye
Igwe ihe nleba anya ARM A53 1.5GHz 32KBI
ihe mmetụta ihe oyiyi
SONY IMX, 1/1.8" CMOS na-aga n'ihu nyocha
0.1 Lux (gburugburu okporo ụzọ n'abalị)
10-30 etiti / nke abụọ
Isi iyi 3840×2160 Sub iyi 1280×720
Nhazi njirimara ụgbọ ala
Ụgbọ ala / gwongworo / ụgbọ ala / ọgba tum tum (tricycle) / igwe
Njikwa ngwanrọ webụ
ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri 485
45 ~ 95%
Ihe nkiri vidiyo ụgbọ ala HPC199 maka ịgụta ụgbọ ala
Anyị nwere ọtụtụ ụdị IR Mpempe ụgbọ ala, 2D, 3D, AI Mpempe ụgbọ ala, enwere mgbe ọ bụla nke ga-adabara gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-akwado ihe kacha dabara adaba Mpempe ụgbọ ala maka gị n'ime awa 24.
Nke gara aga: MRB AI igwe igwe HPC198
Osote: Igwefoto ọgụgụ isi MRB HPC010
Usoro ọgụgụ AI maka ụgbọ ala
Sistemụ ọgụgụ ụgbọ ala AI
na-agụ igwefoto maka ụgbọ ala
Ụgbọ ala AI counter
Sistemụ ọgụgụ AI nke ụgbọ ala
counter ụgbọ ala
igwefoto na-agụta ụgbọ ala
usoro ịgbakọ ụgbọ ala